AFTI makadhicikartaa dhulka Soomaali Galbeed – Ahmed A. Abdulahi
AFTI makadhicikartaa dhulka Soomaali Galbeed
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 September 17, 2018 1 Minute
by Ahmed Abdi.
Soomaali Galbeed’ Waa magaca dadbadani uguyeedhaan kudhawaad 9 milyan dadlagu Qiyaaso oo kunool galbeedka iyo bariga fog ee itoobiya Waa dhul udhigma sadex meelood dhulka soomaalidu dagto ee geeska afrika.
Hadaba lagasoobilaabo qabsashadii Itoobiya aykagalawareegtay dhulkii looyaqaanay ‘Hawd land’ ama ‘Ogaden Territory’ guumaysigii ingiriiska dagaalkii labaad ee dunida kadib Majirin xukun sharciya oo sifiican ucadaynaya taliska itoobiya ee Soomaali galbeed.
iyada oon wada ogsoonahay in siyaasada Itoobiya ay gabi,ahaanba isbadashay fursado siyaasadeedna lasiiyay dhamaan axsaabtii siyaasadeed ee wadanka kamaqnaa waqtibadan
Hadaba tani fursad ma unoqonkartaa Shacabka soomaali galbeed inay helaan fursan ay Ugucodeeyaan MADAXBANAANI Taasoo ay dadku deegaanku sanado badan kutaamayeen iyadoo siwayn looga faa,iidaysanayo siyaasada cusub ee itoobiya sidayse suurtu galkunoqonkartaa inay AFTI kaqabsoonto dhulka Soomaaligalbeed?
Waa Fikrad aan idin lawadaagayo dhamaan dhalinta iyo dadka kuxidhan ciwaankaygan, waad kumahadsantihiin Akhrintiina. Fadlan igacaawi faafinta Site kaygan aan kusooqoro fikradaha iyo qoraalada ay sameeyaan aqoonyahano kaladuwan.
Previous Post Will Jawar Mohamed’s visit to Jigjiga ease tensions between the Somali and Oromo
Next Post a record breaking number of deaths in the capital Mogadishu is worrying every Somali
2 thoughts on “AFTI makadhicikartaa dhulka Soomaali Galbeed”
Maamed Amin says:
sxb wad ku mahadsann tahay qoraladada iyo fikiradadad wngsan
Horray usoco sxb
waxbadan oo wngsan ayd nagusoo kordhin kartaa